"Sidee ayaan u soo guuraan photos iPhone in an drive dibadda adag? Waxaan leeyahay ka badan 5000 sawirada badbaadiyey on my iPhone. Hadda waxaan u baahan tahay inaad lacag la'aan ah ilaa iyo meelo dheeraad ah oo music videos, si ay dhacdo in this waxaan u leeyihiin in ay badbaadin sawiradan iPhone in an drive dibadda adag. Fadlan ii caawiyaan. baan ka cararayaa in Windows 7. " - Sophie
Marka lagu badbaadinayo iPhone photos in drive dibadda adag waxaa ku xusan, dadka qaar soo jeedin doonaa iPhone aad aad ku xidhan kombiyuutarka iyo aad u hesho sawiro iPhone soo baxay, iyaga gelinaya ah drive dibadda adag. Runta waxa ay tahay iPhone waxaa loo isticmaali karaa sida baabuur dibadda adag tahay in la dhoofiyo sawiro ku giringiriya Camera in computer iyo in drive dibadda adag. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaaddo si ay u gudbiyaan iPhone Photo Library, waxaa ku guuldareysto. Si aad u hesho dhammaan photos iPhone in an drive dibadda u adag, waxaad u baahan tahay xoogaa gargaar ah ka qaar ka mid ah qalab xirfadeed. Soo socda waa tusaalooyin in ay ku tusaan sida loo badbaadiyo sawirrada iPhone in an drive dibadda adag.
Qaybta 1. Transfer in aad gaari ku adag dibadda si toos ah ula TunesGo Retro.
Qaybta 2. Transfer sawiro ka iPhone in computer ka dibna si drive dibadda adag
Qeybta 1: Saxiixa sawiro ka iPhone in drive dibadda adag si toos ah ula TunesGo Retro
Wondershare TunesGo Retro waa qalab ah in aan u socoto si ay u isticmaalaan in ay dib u kor photos iPhone in drive dibadda adag. Waxa uu kala soocay version for Windows iyo Mac. Hoos waxaan diiradda saaraan version Windows. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Mac) on Mac. TuneGo Retro , nuqul ka photos, music, playlists, videos ka iPod, iPhone & iPad in Lugood iyo in aad PC u gurmad.
Iyo TuneGo Retro waxaa filaayo in ay la jaan qaada iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, 5c iPhone, iPhone 5S, iPhone 6 Plus, iPhone 6 iyo iPhone 6s Plus iyo iPhone 6s, haddii ay ordaya macruufka 5, 6, 7, 8,9.
Download Mudanayaasha ka eeg xiriirka hoose
xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka
xiriiriyaan drive dibadda adag tahay in kombiyuutarka, waxayna ku xiran tahay software-ka hawlgalka aad isticmaasho, daaqado u soo bixi doona hawlgallada "My Computer" halka Mac Kombiyuutaro drive USB dibadda adag ka muuqan doontaa desktop. Double guji TuneGo Retro si ha u ordaan on your computer, markaas xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo cable iPhone Timid telefoonka. Marka kor ku xusan ee la sameeyey si guul ah, TuneGo Retro ogaan doonaa iPhone oo ka muuqan doona in ay carmal hoose
xiriiriyaan drive dibadda adag tahay in kombiyuutarka
in la hubiyo drive dibadda adag leh xasuus ku filan sawiro aad rabto in lagu wareejiyo. Sida laga rabo, baarista flash u fayrusyada si aad u ilaaliso PC.
gurmad iPhone photos in drive dibadda adag
Marka aad telefoonka waxaa muujinaya on dariishaddii TunesGo Retro, iyo drive dibadda adag xiran yahay si aad u computer, dooro "Sawiro", taas oo ah bidixda ee TuneGo Retro uu furmo suuqa ugu weyn. IPhone socda macruufka 5 ilaa 9 ayaa sawiro badbaadi doona galalka, "Roll Camera" iyo "Photo Library". In kaas oo "ku giringiriya Camera" dukaamada photos ood isticmaalaya telefoonka halka "Photo Library" dukaamada photos in aad synced doonaa Lugood, haddii aad abuuray galalka shakhsi ah ee aad taleefan, sidoo kale waxa ay halkan ka muuqan doontaa. Marka aad gujisid mid ka mid ah fayl (kuwaas oo lagaga wada hadlay kor) photos, sawiro galka muuqan doonaa. Waxaad dooran kartaa folder ama sawiro aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan si aad drive dibadda adag, ka dibna riix "Dhoofinta in" doorasho oo la arki karo oo ku saabsan bar ugu sareeya. Suuqa kala pop-up A muuqan doonaa, xulo USB drive dibadda adag oo guji in si furo waxaad badbaadin kartaa sawiro ku.
Part 2-1: Saxiixa sawiro ka iPhone in computer ka dibna si drive dibadda adag
xal 1: ka iPhone Bedelka photos in computer isticmaalaya email
Tag codsiga sawiro aad iPhone oo abuurtaan.
Raadi ee sawirrada aad dooneyso in lagu wareejiyo si aad u computer. Tubada badhanka la doortay si ay u ogolaanaya in aad si loo doorto in ka badan hal sawir.
jaftaa badhanka Share ka. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u ogolaan doonaa oo keliya inaad soo dirto ilaa shan sawiro waqti. On pop ah ka dib markii aad ka dooran share, doortaan "Mail" ayaana codsiga mail in la furo suuqa kala fariin cusub la sawiro aad dooratay ku lifaaqan.
Ku qor cinwaanka emailkaaga oo kale in ay kuu soo dirto sawiro adigu.
Helaan xisaab email aad computer dadka isticmaala Gmail, aad email yeelan doonaan thumbnails ah tiirarkii hoose ee aad fariin.
Dadka isticmaala yahoo, ikhtiyaarka lifaaqa download ayaa u sareysa, aad riix kartaa download dhan ku lifaaqan.
image wuxuu noqon doonaa dejisan iyo hoostiisa si aad Downloads Folder, oo ku yaalla dhanka bidix ee sahamisa daaqadaha.
Xalka 2: ka iPhone Bedelka photos in computer isticmaalaya iPhoto
Isticmaalka cable Timid telefoonka ah, xirmaan iPhone in aad Mac.
Codsiga iPhoto ku saabsan Mac Launch. dhanka bidix ka yar AALADAHA waa inaad awoodid inaad aragto iPhone noqon. Tubada badhanka la doortay si ay u ogolaanaya in aad si loo doorto in ka badan hal sawir.
Dooro sawirrada aad dooneyso in dajiyaan ama waxaad dooran kartaa dhammaan sawiro iyo videos galay maktabadda iPhoto On pop ah ka dib markii aad share la xusho, doortaan "Mail" ayaana codsiga mail ah in la furo suuqa kala fariin cusub la sawiro aad dooratay ku lifaaqan .
On Finder, dooro Edit, dhaji XX Items, markaas paste photos iyo / ama videos aad keeno si drive adag ee aad Mac.
Qeybta 2-2, markaas sawiro ka PC wareejiyo si aad drive dibadda adag
Connect aad drive dibadda adag tahay in aad computer hubinta in drive dibadda adag ayaa meel ku filan sawiro aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan.
Dooro sawirada aad keeno ka iPhone in aad PC dhanka bidix ka yar AALADAHA aad awoodi kartid in aad aragto iPhone noqon. Tubada badhanka la doortay si ay u ogolaanaya in aad si loo doorto in ka badan hal sawir.
Click Xaqa oo nuqul ka dooro, On pop ah ka dib markii aad ka dooran share, doortaan "Mail" ayaana codsiga mail in la furo suuqa kala fariin cusub la sawiro aad dooratay ku lifaaqan.
Fur aad drive dibadda adag. Xaqa guji qaybta cad ee suuqa kala dooro koollada si ay u dajiyaan oo dhan sawirada aad soo guuriyeen ka PC
Daawo Video uu ugu dhaqaaqi iPhone Photos in an External Hard Drive
Ma doonaysaa in Hagaaji in macruufka 8? Waxaa laga yaabaa inaad danaynaysaa in aad ka
5 Waxyaabaha la sameeyo ka hor inta macruufka 8 Hagaaji
Space Free Up ee macruufka 8 Hagaaji
4 Siyaabaha iPhone kaabta leh ama aan lahayn Lugood
A Guide Full in rakib macruufka 8 ilaa iPhone
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan Content ka Android inay iPhone
10 Waxyaabaha aad Sameyn Karto la iPhone ah in uu leeyahay ESN xun ama madow IMEI
> Resource > iPhone > Sida loo dhaqaaq iPhone Photos in an External Hard Drive